Mikel Obi Nwatakiri Akụkọ nke Akwukwo Nso
Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Mikel Obi Nwatakiri Akụkọ nke Akwukwo Nso
LB na-egosi Full Story of a football football onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Chapman'. Mikel Obi Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke onye a hụrụ n'anya na Nigeria na Chelsea Football Lgend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch obere ihe ọmụma banyere ya. Na-amalite.
Mikel Obi Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
John Michael Nchekwube Obinna nke a maara dịka John Obi Mikel, John Mikel Obi ma ọ bụ Mikel John Obi mụrụ na 22nd Eprel 1987 na Jos site n’aka Pa Michael Obi, onye ọrụ ezumike nka na nne ya lara ezumike nká, bụ Oriakụ Irosu Obi, nwanyị na-azụ ahịa.
Dominic Solanke Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mikey dị ka onye a maara nke ọma n'oge ọ bụ nwata bụ nwa ewu maka ịdị ukwuu ogologo oge tupu ya akụda kpakpando.
Dị ka nwa nke onye ọrụ bekee nke obere, o biri obere ndụ maka ọtụtụ oge ntorobịa ya. O nwere ikike, omume na ntachi obi Nke a bụ ihe kpaliri ya ịdị ukwuu.
Mikel Obi Biography - Otu o si malite football:
Ọ malitere mgbe mbụ a hụrụ talent ya n'egwuregwu bọọlụ nke Jos Metropolis Township Primary School nke ọ gara.
Didier Drogba Child Story Plus Na-agbaghasị akụkọ ndụ
Mikel bụ onye bụbu Alhaji Babawo Mohammed Adamu, bụ onye bara ọgaranya na onye na-ahụ maka bọọlụ nke nọchiri emechi ahụ.
N'ajụjụ ọnụ, nke a bụ ihe Alhaji Babawo Mohammed Adamu kwuru;
“Enwere m ike ikwu n’enweghị mgbagha ọ bụla na abụ m onye ahụ chọtara ya (John Mikel Obi) mgbe ọ bụ nwata.
M kwadoro ya n'ọtụtụ ụzọ ka ọ ghọọ ihe ọ bụ taa. Ọ na-egwuri egwu n'okporo ámá dị nso na mpaghara m ebe m họọrọ ma nyere ya aka.
Echetara m ụbọchị mbụ m hụrụ ya, akpọrọ m ya gwa ya ihe m hụrụ n’ime ya. Ekpebiri m inyere ya aka ka ndị ezinụlọ ya anaghị akwado ya iji kwado ya, ka ekpughere.
Enwetaghi otutu onyinye maka ọrụ di oke mkpa Adam mere n'olu Obi. Ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbe ọ na-ama jijiji, dị ka ọ na-ekwukarị na ya nwere telepathic nghọta nke ihe.
Michael Essien nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma
Dị ka Alhaji Babawo Mohammed Adamu si kwuo
“Mikel na-akpọkarị ka ọ chọọ ndụmọdụ, m na-adụkwa ya ọdụ n’ihe m maara ga-adịrị ya mma ma ọrụ ya ma nsogbu ndị ọzọ.
O doro anya, ọ tụlekwara nsogbu ya na Chelsea na ọ bụghị ihe ijuanya na ọ kwagara China.
N'ezie, ọtụtụ mmadụ nwere echiche dị iche iche mana Mikel bụ ezigbo nwoke; ọ bụ onye echekwara, ihere na-eme ya mgbe ụfọdụ.
Ọ bụkwa naanị ya bụ onye ọkpụkpọ m maara na-akwanyere ndị enyi ochie ya ùgwù ma soro ha ruo ụbọchị. Ọ bụ onye na-enwe mmasị inyere ndị na-enweghị obere aka na ndị enyi ya aka, ọkachasị ndị enyi ya ochie ”.
Ọnye na-bụ Olga Diyachenko? Nwunye Mikel Obi:
Mikel na ịma mma Russia, Olga Diyachenko na-akpakọrịta kemgbe 2013 mgbe ha zutere ya na London.
Petr Cech nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Ná nzukọ ha, Mikel na-ahụ Olga Diyachenko Alegra ọsọ ọsọ na onye nna ya bụ onye na-akpata ego na Russia nke nwere ụlọ ahịa na London. Ọ na-etu ọnụ na eze nwanyị Russia dị mma n'inweta nri ndị Naijiria.
Mikel Obi, Nwunye / Nwanyị na nna, nwanne Inlaws.
Mmekọrịta ya na ya malitere n'oge na-adịghị anya ọ kwụsịrị mmekọrịta ya na ogologo oge ya na nwanyị mara mma nke Delta Delta Soap, Queen, Sandra Okagbue.
Onye Naijiria, onye na-eme ihe nkiri na onye ọchụnta ego nke si na Anambra steeti bụ okenye nke ụmụ isii na ada nwa Obi (King) nke Onitsha, Nigeria Ofala Okechukwu Okagbue.
Tiemoue Bakayoko Nwa akwukwo akuko nke oma
Ọ bụ mgbe Miss Delta Soap mma pageant maka 2010 haziri site Orange Ogwu.
“Lovemụ nnụnụ abụọ a na-ahụ n'anya bụ ndị ha na-akpa kemgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 3 kpebiri ozugbo ikpuchi mmekọrịta ha. Mkpakọrịta ha emeela ka ọ sie ike site n'ụbọchị Sandra ga-akwaga na onye midfielder nke Chelsea na ụlọ UK ya.
Ka o sina dị, ọ dịghị onye maara ihe mejọrọ n'etiti nnụnnụ ịhụnanya abụọ. Ọ dịghịkwa onye maara onye mebiri obi ya na ihe kpatara Mikel ji kpebie idozi maka nwanyị ọcha bara ọgaranya.
Ryan Bertrand Nwatakiri Akụkọ nke Akwukwo Nsogbu
Ozugbo ha dara, Sandra mere ngwa ngwa ibipụta ogologo oge na-agọnahụ mmekọrịta ya na kpakpando bọlbụ.
Dị ka ya si kwuo, "Nke a bụ ịkọwa izugbe ọha na akụkọ ndị dị ugbu a na-ebu amụma banyere agbamakwụkwọ a chọrọ ịlụ n'etiti mụ, Sandra Okagbue, na Mikel Obi, ezighi ezi.
Enwebeghị ụdị nkwupụta dị otú a n'etiti onye ọ bụla n'ime anyị ma ọ bụghị naanị nkwekọrịta, ma ọ bụ ọbụna a ụbọchị agbamakwụkwọ dị ka nụrụ kepu kepu. "Enweghị eziokwu na akụkọ ndị mụ na Mikel Obi na-alụ."
"E nweela ọtụtụ akụkọ ụgha banyere m na akwụkwọ, na ọtụtụ blọọgụ. Enweela aha m na ọtụtụ ndị m weere na ọ bụ ezinụlọ m maara.
Offọdụ n'ime akụkọ ụgha ndị a gara ọbụna na-ekwu na ọ bụ ndị a zụtara ụlọ ezinụlọ m eche echiche ụmụ nwanyị.
Nke a na-akụda mmụọ. Esi m aha a na-akwanyere ùgwù ezinụlọ eze na, anyị bụ ndị na-arụsi ọrụ ike. Anyị enwetawo ihe niile anyị nwere okwukwe na Chineke na ịrụsi ọrụ ike. "
"M ga-achọ ịrịọ ndị inyom na ndị nwe obodo a na-akwanyere ùgwù ka ha nwee ike na-eme ka ọbụbụ anya kwado ihe ọ bụla ọmụma ha ga-achọ ịkọ akụkọ banyere m tupu e bipụta ya. "
"Ekele dịrị maka nkwado gị."
Mikel Obi Biography - Isoro Olga biri:
Mikel mgbe ọ kwụsịrị ịlụ ya na ụmụ nwanyị ndị Naijiria na-akpakọrịta na mmekọrịta chiri anya.
Ọ ghaghị isoro onye ọ na-eche na ọ ga-enye ya udo nke uche na obere nchegbu na-echekarị ihe gbasara ego iji si obodo ya. Nke a bụ mgbe nwa nwanyị billionaire Olga bịara n'ime ndụ ya.
Dị ka Mikel si kwuo. ”Mkpụrụ obi m na-amụmụ ọnụ ọchị n’ime obi m na obi m na-amụmụ ọnụ ọchị n’ime obi m. Emechaala m gbasasịa ọchị ọchị na obi m dị mwute ”.
Ọtụtụ ndị Nigeria karịsịa ụmụ nwanyị na-achọsi ike ịnabata ya dị ka nwoke ha nwere nkụda mmụọ ịhapụ Mikel na nwanyị ọcha. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ka ghọtara ihe mere o ji mee mkpebi dị otú ahụ.
Kurt Zouma Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Banyere Ndụ
Dị ka ọtụtụ ndị Naijiria ga-etinye ya, - a ghọtara na mgbe ndị mmadụ bara ọgaranya, naanị ihe ha chọrọ bụ ịkpakọba akụ na ụba kama ịkesa akụnụba.
Ha na-achọ ịlụ di ma ọ bụ nwunye ka baa ọgaranya iji belata ọchịchọ ha na-ekesa akụ na ụba ha na ndị ọgọ na nne dara ogbenye. Nke a bụ ihe gbasara Mikel dị ka ọtụtụ ndị ga-ekwu.
Mikel na Olga etoola dị ka di na nwunye kemgbe ha zutere na London. Ha akụziworo onwe ha otu esi mụta ihe site na ibe ha na otu esi ahapụ onwe ha.
Frank Lampard Child Story Plus Na-agbaghaghị Ihe Ndị Na-akpata Ihe Ndị E Dere n'Aka
Ha abụọ kpebiri ime nwatakịrị ka o mee ka ha nwee njikọ ebighị ebi. E wezụga ihe ndị ha tụrụ anya ha bụ ụmụ nwanyị abụọ.
Mgbe ọ kpọghachitere mama anyị n'ụlọ ọgwụ ma ndị enyi jụọ ya banyere otu ọ na-adị maka inwe ụmụ nwanyị ejima, Mikel dinara ala, dabere na nkwụ ya na ha kwuru ihe ndị a;
“Inwe nwa ejima, n’eme ka ihu ihe n’uzo di iche. Ọ dị ka ịmalite ịhụ n'anya ọzọ ".
Mia na Ava etolitela ka ị bụrụ ọla n'anya nne na nna ha.
Mikel Obi ughtersmụ nwanyị, Ava na Mia.
Hụ ka ha na-etolite anaghị eku ume. N'ezie, Okwu ezughi igosipụta ịhụnanya na-enweghị atụ Mikel nwere maka ezinụlọ ya.
Ezinụlọ Mikel Obi.
Nna Mikel Obi:
Mikel papa, Pa Obi ka ndi agha abuo jidere ndi mmadu ndi choro ijeri £ 2.4 ka ha wepu ya.
Ndị agha ahụ so n’òtù ọrụ e kenyere ichebe Jos, bụ́ obodo a ma ama nke ime ihe ike agbụrụ na nke okpukpe na-enye nsogbu.
Mana kama idobe udo ahụ, ndị agha jiri ụgbọ agha kwụsị Michael Obi ka ọ na-ala ụlọ ọrụ ma kpụrụ ya pụọ.
Nke a bụ otú ihe ahụ merenụ mere dị ka onyeisi ndị uweojii, Mr Ayeni kwuru. - - Ndị agha ahụ gwara Mr Obi ọchịagha ha chọrọ ịhụ ya. N’atụghị egwu, ọ gara izute ọchịagha ndị agha na van.
Ha ngwa ngwa kpụga ya n'oké ọhịa ebe a kụrụ ya ihe. Iti ya ihe bụ ịtụ egwu ya nke ha chere na ọ ga-eme ka ọ ghara ịga nke ọma.
Ndị ntọrọ mmadụ gwara Mr Obi “ka o nye ha $ 4bn (£ 2.4bn), nke ha kọwara dị ka 'mgbanwe ọkụkọ' na Mikel, ọgbakọ Chelsea ya na nke kachasị, onye nwe ya bụ Roman Abrahimovic.
Ekwenyere m na Chelsea FC bara ọgaranya n'oge ahụ, Ayeni kwuru .. Ndị ikom m wakporo ebe nzuzo Kano ebe ndị omempụ jidere nna Mikel, na-ahapụ ya na ịnwụchi mmadụ isii a na-enyo enyo na ha bụ ndị ohi nke gụnyere otu nwanyị ndị agha.
Mikel Obi nna nna ya.
Mikel kwuru na ịtọrọ mmadụ mere ka ụjọ jide ya n’ihi na ndị ezinụlọ ya enweghị nsogbu ọ bụla n’ebe ahụ. Pa Obi gwara ndị nta akụkọ:
“E nwere mmadụ ise n’ime ha ma yi uwe ndị agha. Mgbe ha rutere nso igosi akwụkwọ mpempe akwụkwọ m, ha kpọbara m ozugbo n'ime ụgbọ ha nke agba agba ndị agha wee malite ịgba ọsọ ọsọ.
Amaghị m na ụgbọala nwere ike ịda ụdị ihe a, ọ bụ mgbe ọ batara m n'uche ka a na-atọrọ m.
Ozugbo m matara na ọ bụ ịtọrọ mmadụ, amalitere m ịrịọ ha ka ha meere m ebere, mana ha na-akụ m ụra ma na-eti m ihe n'obi ebere. Ha debere m n’ebe dị egwu. Amabeghị m otú m si tachie obi. ”
N'oge nna ya nwụrụ, Mikel siri ike iji gaa n'ihu na-akpọ Chelsea - na-amalite egwuregwu megide Stoke City na West Bromwich Albion.
Mgbe ọ hụrụ na a tọhapụla nna ya, ọ gara ngwa ngwa n'ịntanetị iji kelee onye ọ bụla na Nigeria, ezinụlọ ya na ndị enyi ya, Chelsea FC na ndị na-akwado ha na ndị ọrụ ya maka nkwado ha niile n'oge egwu a.
Onye na-elekọta Chelsea bụ Andre Villas-Boas kwuru na “Ịtụnanya nke uche ike” onye midfielder gosiputara na ntinye nke nna ya.
Otu onye Chelsea na nkwupụta kwuru, sị: "Mikel gosipụtara ezigbo ọrụ na ọkachamara n'oge a siri ike n'oge a, klọb ahụ ga-anọgide na-enye ya na ezinụlọ ya nkwado zuru oke."
Mikel Obi na ụmụ nwanyị Nigeria:
Mikel kwuru na ya na ndị ole na ole na ndị enyi mara mma sitere na Nigeria nwere mmekọrịta ịhụnanya.
Mikel Obi na Genevieve- Akụkọ Na-adịghị Agbanwe.
Mikel Obi na Genevieve Nnaji malitere mmekọrịta ha na ha ma Amstel Malta abanye ha ka ha bụrụ ndị nnọchianya. Mikel kwuru banyere diva ihuenyo iji kpochapụ mkparịta ụka ndị nwoke na nwanyị na-akpa n'oge a na-ahazi maka ụlọ ọrụ Nigeria Breweries na Lagos.
"Anyị na-arụ ọrụ ọnụ, ọ bụ ọrụ mmekọrịta". "Anyị kwadoro Amstel Malta ọnụ, ọ bụ ezigbo mmadụ; Agwara m ya ugboro ole na ole na ọ bụ ezigbo mmadụ. "
Mikel Obi ka a nụchara na Marry Rita Dominic.
Dị ka ọtụtụ ndị hụrụ foto ha, ha yiri ka ha karịrị enyi nkịtị.
Ọ na-efe naanị ya ozugbo na Abuja mgbe ọ gachara egwuregwu sunday na Calabar iji hụ ya. A hụla ha abụọ mgbe emechara.
Ha abụọ sere foto, nke mere ka asụsụ dị iche iche na-egwu na kpakpando abụọ ahụ dị mma ọnụ nakwa na ha nwere ike ịbụ ezigbo egwuregwu, na-ekpe ikpe site na mpempe foto ahụ.
Nye ọtụtụ ndị Nigerians, ọ gaghị ekwe omume na mmadụ abụọ ahụ na-abanye n'ime onwe ha na mberede na ọtụtụ ndị Naijiria Naijiria nọ na London n'ebughị onye ọ bụla na-ahapụ Mikel bụ onye na-enwe oge mgbatị.
Mikel Obi Biography - Mmegide nke Girlsmụ nwanyị Naijiria nwere obi mgbawa na Instagram:
Girlsmụ agbọghọ Naijiria na-ekwo ekwo na-akparị enyi nwanyị Mikel (Olga) na Instagram. Mikel bụ nnukwu tost nke ọtụtụ ụmụ nwanyị Naijiria ma ha enweghị mmasị n'eziokwu na ọ gara maka nwanyị ọcha.
Dika nwunye ya gwara ya ka ya na otu n'ime umu ya ejima na-eri spaghetti, umuaka Naijiria weghaara ya ka o nye ha ihe agha. hụ okpuru;
Olga Instagram ọgụ.
Mikel Obi Bio - Fathermụta ụmụaka abụọ na nzuzo:
Akọrọ na Mikel Obi bụ nna nzuzo nye ụmụ abụọ mgbe ya na ụmụ nwanyị abụọ nwee mmekọrịta dị mkpirikpi.
Akụkọ na-ekwu na o nwere nwa nwoke toro eto nke ukwuu na obere nwa nwanyị nke ọ na-ezobe na ihu ọha. Moreso, mgbe ọ zụtara ala ,500,000 XNUMX dịpụrụ adịpụ na London maka nwa ya nwoke na nne nwata ahụ.
Ọzọkwa, e kwuru na nwa ya nzuzo, nwa nwanyị na nne nne ya 23 nọ na South England. Otú ọ dị, ụmụ nwanyị abụọ a kọrọ na ha amaghị banyere ibe ha.
Sun na Sunday kwuru otu mgbe na Mikel zutere nne nwa ya na nnọkọ oriri na ọ inụ inụ na London. Mgbe ọ mụsịrị nwa, isi iyi ahụ kwuru, Mikel 'kwetara inye ya iri puku kwuru iri puku kwa afọ iji lekọta ya' ma 'kwetara inye ya ụgbọala ọhụrụ kwa afọ atọ ma ọ bụ ise.'
'O kwuru na ya chọrọ ikere òkè na ndụ ha. Ya na nne na-enwe mmekọrịta enyi na ọ naghị eburu ya ajọ echiche, ikekwe n'ihi na ọ na-elebara ya anya nke ọma. '
Otu ezigbo enyi ya na mama ya kwuru ozugbo: 'O esiteghi na ezi ezinụlọ ma ọ naghị enweta nnukwu ego ugbu a, mana ọ na-agbagharị n'ụgbọala ọhụrụ. O yiri ka ọ abatala ego kemgbe ọ mụrụ nwa nwoke. Anyị nọ n'ógbè anyị maara na ọ nọ na-eweda profaịlụ. '
Otú ọ dị, Sun na-ekwuchitere ndị na-agba ama maka Sunday na Sunday dịka o kwuru, sị: 'Nke a bụ ihe nzuzo kpamkpam. John na-elekọta ma na-elekọta ụmụ ya ma na-anọgide na-eme otú ahụ. Ọ na-arịọ ka asọpụrụ ihe nzuzo ha. '
Mikel Obi Biography Eziokwu - ressọpụrụ ndị nta akụkọ Naijiria:
Na ya bụ "mpako, enweghị nkwanye ùgwù na snobbish '
Mikel Obi: "Anaghị m ewe iwe na ndị mgbasa ozi Nigeria mgbe ha na-ede ihe na-ezighi ezi mgbe ụfọdụ, ọ dịka ha na-arụ ọrụ ha.
Ha chọrọ ire akwụkwọ ha. Anaghị m ekwu na Mikel bụ ihe ọ bụla mana mgbe ndị mmadụ hụrụ Mikel n’ihu akwụkwọ ndị ahụ, ha gara zụta ya, eche m na ha na-akpata nnukwu ego na ya.
“Enwere m obi ụtọ isoro ndị nta akụkọ kwuo okwu mana enwere m mmasị na ya mgbe emechara ihe ọfụma, ọ na-amasị m ịgwa ndị nta akụkọ okwu mana abụ m onye ji ọrụ n’aka nke nwere usoro oge.
Nwere ike ọ bụghị naanị ịbịakwute m na-ekwu Mikel Achọrọ m ịgba gị ajụjụ ọnụ, a naghị eme ihe n'ụzọ ahụ, ọ bụrụ na e mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, m ga-asọpụrụ ndị mmadụ, m ga-agba ajụjụ ọnụ.
Mana ọ bụrụ na anaghị ahazi ihe nke ọma, enweghị ike izute m n'ọnụ ụlọ nkwari akụ, ị zutere m n'okporo ámá ma kwuo na m chọrọ ịgwa gị okwu, ọ naghị arụ ọrụ ahụ".
Mikel Obi Biography - Okwu banyere inweta 5 Bentleys:
“Otu ihe bụ na anaghị m abanye na Nigerian Papers, ọ bụghị dịka na a chọghị m ịma ma ọ kpọrọ m, onye nnọchi anya m kpọrọ m, ọ nọ na Naịjirịa wee gwa m na asịrị na enwere m Bentleys ise.
M dị ka ihe, ise Bentley, gịnị ka m ga-eme na ise Bentley, ha niile bụ otu ụgbọ ala ma ọ bụ na ha na-ekwu na m nwere ike na ise dị iche iche na agba mgbe ahụ.
Echere m na ọ na-agbada ruo mgbe ị na-eme nke ọma, mgbe ihe na-agaara gị nke ọma, ị na-abụ ihe ndị mmadụ anaghị atụ anya ka ị bụrụ, ihe ndị mmadụ anaghị atụ anya ka ị rụpụta, ịmara na a ga-enwe mgbe niile asịrị na-efegharị ebe a na ebe ahụ.
Ihe niile dabere na otu ị si ejikwa onwe gị, agbanyeghị onwe gị, na - egbochi onwe gị n'ihe ndị na - ezighi ezi maka gị, achọrọ m igwu egwuregwu a ogologo oge.
Ahụrụ m Chelsea n'anya, aga m achọ ịrụcha ọrụ m na Chelsea mana ọ dabere n'ihe na-eme, onye na-abịa ma na-aga, nke ahụ bụ bọọlụ, anyị ga-ahụ ihe ọdịnihu ga-abụ. ”
Mikel Obi 2 Okwu Esemokwu:
Mikel boro ebubo na ọ ga-agbachasị ama ama ama ama ama ama na Nigeria, 2face site na ịjụ nkwanye aka na klọb na london. Dika akwukwo akwukwo Naijiria si kwuo.
Mikel Obi Vs 2Face- Akụkọ Na-adịghị Agbanwe.
“2face zutere Mikel n’otu ụlọ oriri na ọ nightụ nightụ abalị dị na London, wee gosi ndị egwuregwu bọọlụ ụfọdụ ịhụnanya, mana mikel na-ewe ya iwe. Nke a were ya iwe. 2face wutere ya nke ukwuu, banye n'ime ụlọ ihe nkiri ahụ ma tinye iwe ya na wax. "
Akara ngosi egwu wee wepụta egwu akpọrọ “Naanị m” nke nwere na okwu ya na asụsụ PIDGIN n'asụsụ Nigeria (ọ bụghị ka onye ọ bụla sabi egwu bọl). It nwere ENGLISH IZI; (Ọ bụghị mmadụ niile maara otú e si egwu bọl).
Ọtụtụ afọ gbadata, 2Face, na mkparịta ụka a na nso nso a na Brila FM, kwụsịrị asịrị nke ụdị ihe ahụ merenụ ma kwusi ike na abụ a abụtụghị usoro egwu ma ọ bụ banyere Mikel.
2Baba kpughere na mgbe ọ nụrụ banyere asịrị ahụ n'oge ahụ, ọ kpọrọ oku na maestro midfield na ha mechara bụrụ ọchị maka asịrị ahụ.
Ọ sịrị: “N'oge m mere abụ ahụ, Mikel nwere nsogbu na enweghị ike igosi egwuregwu ụfọdụ nke Super Eagles.
Mgbe ahụ, ụfọdụ ezigbo asịrị na-ahọrọ akara site na abụ m n'ihe banyere ịhụ mba n'anya na-anọchite anya ndị otu egwuregwu bọọlụ mba ma jiri akụkọ banyere esemokwu dị n'etiti anyị na-agba ọsọ.
Agwara m Mikel na ekwentị ma anyị nwere ezigbo ọchị banyere ya. ”
Mikel Obi runk Dụ mmanya Na-akwọ Mgba:
Mikel abụghị maka igwu egwuregwu ahụ ka ọ nọ na-eje ozi mkpochapu. O kpebiri ịga rie nri abalị ebe ọ na-eri ihe dị n'agbata iko mmanya anọ na ise mgbe ọ lechara otu egwuregwu na Stamford Bridge.
A chọtara na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ karịa mgbe ndị uwe ojii kwụsịrị ya ojii Range Roger na Fulham Road, ọdịda anyanwụ London.
Onye ọka ikpe mpaghara Jeremy Coleman machibidoro ya ịkwọ ụgbọala ruo ọnwa 15 wee nye ya iwu ịkwụ £ 1,580 na Londonlọikpe Magistrates West West.
Mikel Obi Eziokwu Akụkọ - Michael / Mikel Mistake:
N'oge nkwadoro maka 2003 FIFA Under-17 World Championship, Ngwá Ọrụ Ngwá Ndị Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ Nigeria kwetara "Michael" dịka "Mikel" maka asọmpi na Finland.
O kpebiri idebe aha ohuru ahụ, na-ekwu na ọ nwere mgbanaka pụrụ iche na ya. Na 31 July 2006, o kwuru na ọ na-ahọrọ ka a kpọọ ya Mikel John Obi kama John Obi Mikel, dị ka a na-akpọkarị ya. A ghaghị ịmekọrịta ihe a na paspọtụ ya.
Mikel Obi Ndụ Mmalite Ndụ:
Ọ malitere ọrụ egwuregwu football ya mgbe ọ dị afọ 12 mgbe a na - ahọrọ ya dị ka onye nwere nkà n'ịgba umuaka nke 3000 ka ọ kpọọ na Pepsi Football Academy.
Peplọ akwụkwọ mmuta nke Pepsi bụ otu otu n'oge ahụ a maara nke ọma maka ịgagharị Nigeria iji chọọ ihe kachasị mma site na kpakpando ndị na-abịanụ, ndị na-eto eto na-eto eto ka ha ga-emecha bụrụ ọkachamara na football.
Ugbua, Obi kwụụrụ ndị niile na-egwu egwuregwu. A họpụtara ya ka ọ kpọọ otu egwuregwu elu United Plateau United makwaara maka ịme kpakpando site na ndị egwuregwu dị ka Celestine Babayaro, Victor Obinna, Chris Obodo na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndị ọgba bọọlụ mbụ a gara n'ihu na-egwuri egwu n'òtù ndị Europe ma na-anọchite anya obodo ha mgbe e mesịrị na ọrụ ha.
Emechara mara John Obi Mikel, ọ na-enweta akụkọ maka obodo ya na FIFA Under-17 World Championship nke emere na Finland.
N'ikpeazụ, a na-ekpe ya ikpe na Ajax Cape Town nke South Africa, Lyn na Norway tupu ya abanye na Chelsea FC. Ihe ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme.
Mikel Obi Biography - Bilie Iji Mara Aha:
N'oge okpomọkụ nke 2005, Mikel kụrụ maka Nigeria na FIFA World Youth Championships nke e mere na Netherlands. O nwere ntụrụndụ mara mma ruo mgbe Nigeria ruru n'ikpeazụ, ebe 2-1 furu efu na Argentina. Ọ meriri Silver Ball mgbe a họpụtara ya na onye ọkpụkpọ abụọ kacha mma.
Mikel meriri U-20 Silver Football mgbe a họpụtara ya na onye ọkpụkpọ kacha mma na 2005. E nyekwara ya onyinye mmeri nke African Young Player of the Year na 2005 na 2006. Ọ bụ Lionel Messi bụ onye meriri ọkpụkpọ kacha mma na akara kacha mma. enọ
Mikel Obi Untold Biography Eziokwu - Nyefee Esemokwu na England:
Na 29 Eprel 2005, ụbọchị ole na ole mgbe Mikel mechara 18, Premier League club Manchester United kwupụtara na ya na ndị Norway Lyn Oslo nwere nkwekọrịta iji banye onye ọkpụkpọ ahụ.
Ebe nrụọrụ weebụ United kwukwara na ha na ndị na-eto eto emeela ihe ọ bụla nakwa na ọ bịanyela aka na nkwekọrịta iji sonyere ha.
A gafere ndị ọrụ Mikel ka ụlọ ọrụ ahụ mere ka nwata ahụ bịanye aka na nkwekọrịta afọ anọ na-enweghị nnọchite anya. Lyn Oslo kwuru zigara ndị ọrụ ya ozi faksị na mba ọzọ, na-ekwu na Mikel achọghịzi ọrụ ha.
Akụkọ kwuru na azụmahịa ahụ ruru £ 4 nde na mbụ, ọ ga-ahụ ka onye ọkpụkpọ ahụ rutere Old Trafford na Jenụwarị 2006.
Njikọ Njikọ Njikọ n'akụkụ, Chelsea, mechara wepụta nkwupụta na-egosi na ha na Mikel na ndị ọrụ ya enweela nkwekọrịta, mana Lyn Oslo gọrọ ebubo a.
Otú ọ dị, akụkọ ndị sochirinụ gosiri na Chelsea kwuru na ha etinyela aka na ịhazi mbido ọkpụkpọ mbụ ahụ na Europe na mbinye aka na mbubreyo.
Agbakwunyere ihe ọzọ na nkwupụta a mgbe ekpughere na onye ọkpụkpọ ahụ masịrị onye njikwa Chelsea Jose Mourinho mgbe ya na ndị otu egwuregwu otu egwuregwu na-azụ ọzụzụ n'oge ọkọchị nke 2004.
Mikel kwupụtara na ọ na-atọ ya ụtọ ịbanye United na nchịkọta ogbako ngwa ngwa, ebe ọ nọ na-ese onyinyo ụlọ elu Manchester United, bụ nke mụpụtara 21 nke ndị agha ahụ.
Mikel Obi Biography Eziokwu - Mgbe getsga Na-esi Ike:
Mgbe ọ bịanyechara aka na nkwekọrịta ahụ iji sonyere Manchester United, ebubo sitere na Norway na ọ natara ọtụtụ oku ekwentị na-eyi egwu site na isi mmalite. E kenyere Mikel onye nche wee kwaga na họtel dị nchebe.
Otú ọ dị, na May 11, 2005, onye na-eto eto na-efu efu n'oge egwuregwu Norwegian Cup megide Klemetsrud; ahọpụtabeghị ya maka egwuregwu ahụ mana o si na-ele ya na-ele.
Ọ bụ ezie na a kwenyere na onye ọkpụkpọ ahụ hapụrụ otu n'ime ndị ọrụ ya, John Shittu, onye gbabatara ugbu a ka ọ zute Mikel, mfu ya kpatara nnukwu mgbasa ozi na Norway.
Ọ kpalitere ajụjụ ndị uwe ojii mgbe onye isi Lyn Oslo bụ Morgan Andersen kwupụtara na mgbasa ozi Norwegian na 'dọọrọ' Mikel '.
Nkwupụta ndị a mechara bụrụ onye osote onye njikwa Manchester United Carlos Queiroz, onye boro Chelsea ebubo na ha tinyere aka na ebubo 'ịtọrọ'.
O mechara pụta na Mikel gara London na onye ọrụ ya John Shittu. Onye nchịkwa Manchester United bụ Alex Ferguson tụlere ịga Oslo ịga leta Mikel, mana o kpebiri megide nke a mgbe a kọchara na Mikel hapụrụ mba ahụ.
Staynọ na nkwari akụ London, na ụbọchị itoolu mgbe ọ nwụsịrị, Mikel kwuru na Sky Sports News na a manyere ya ịbanye na nkwekọrịta ahụ na United, na-ekwu na Manchester United na Lyn Oslo ji iwe jụ iwe ya.
Mikel kwukwara na ya arịọla klọb otu izu ka ha chee echiche, mana na a jụrụ arịrịọ a ma klọb manyere ya ịbanye na-enweghị ndị ndụmọdụ ya nọ.
Ihe Mikel kwuru, ọ bụrụ eziokwu, ga-apụta na Manchester United mere ihe megidere iwu FIFA na iwu FA. Mikel gwara ndị mgbasa ozi Britain na Chelsea bụ ụlọ ọrụ ọ chọrọ n'ezie ịbanye.
Na nzaghachi maka ihe omume ndị a, United mere mkpesa maka gọọmentị na FIFA banyere omume nke ma Chelsea na ndị ọrụ ọkpụkpọ ahụ, John Shittu na Rune Haunge, bụ ndị ama ama maka ọrụ ya na ọgba aghara George Graham.
FIFA kpochapụrụ nkwupụta ndị a na August 2005 na-ekwu na enweghị ihe akaebe zuru oke iji weta ikpe megide Chelsea.
Mgbe Mikel kwusịrị asọmpi ahụ, ọ laghachighị Lyn Oslo, ụlọ ọrụ ahụ wee nwee mkpesa na FIFA.
Na August 12, 2005, FIFA kpebiri na Mikel kwesịrị ịlaghachi na Lyn Oslo iji hụ nkwekọrịta ya na ụlọ ọrụ Norwegian, ebe ha ga-ekpebi n'oge na-esote ma nkwekọrịta ọ bịanyere aka na United kwesịrị ịkwado ma ọ bụ kagbuo.
Mgbe ọ na-egbu oge ihe karịrị otu ọnwa, Mikel kwenyere na mkpebi FIFA wee laghachi Lyn Oslo na mbido September 2005 mgbe ọnwa atọ gachara.
Kama ịhapụ FIFA iji chọpụta izi ezi nke nkwekọrịta a na Manchester United bịanyere aka na ya, Chelsea batara site na ịwepụta onwe ya iji dozie saga ahụ site na mkparịta ụka na Lyn Oslo na Manchester United.
Na June 2, 2006, Chelsea, Manchester United na Lyn Oslo ruru nkwekọrịta iji dozie ọdịnihu nke onye ọkpụkpọ ahụ. Ihe ndekọ Mikel ga-esi na Lyn bufee ya na Chelsea; Manchester United kwetara ka ha kwụsị Mikel.
N'okpuru usoro nkwekọrịta a, Chelsea kwetara ịkwụ ụgwọ Manchester United £ 12 nde, ọkara kwụrụ ụgwọ maka mmezu nke nkwekọrịta ahụ na ọkara nke ọzọ na June 2007, na Lyn £ 4 nde, ọkara ga-akwụ ụgwọ ozugbo na ọkara na June 2007.
Site na nhazi a, ewepụrụ ebubo niile n'okwu a. Na July 19, 2006, e nyere Chelsea ikike maka ọrụ maka onye na-eme egwuregwu mgbe ha mechara ndebanye nde 16 na June 2006.
Mikel Obi Na-agabiga Record:
O nwere ihe nkwụsị nke 89.93% maka afọ 3 mbụ ya na Chelsea. Nke a dị elu karịa onye ọ bụla nọ na Premiya na-agbakọta n'oge ahụ.
N'ime afọ atọ a, ọ bụ onye ọkpụkpọ kacha mma na Premier League nke na-efunahụghị ọtụtụ bọọlụ. Ọ bụ ya kachasị mma.
Mikel Obi Biography Eziokwu - Ndụ LifeBogger:
Chapman bụ ọgụgụ isi n'ọkwá ya. Gị onwe ya anaghị enweta otuto dị ukwuu maka ọrụ ọ na-arụ maka ndị otu ya. Anyị na-enye gị mmebi nke ọkwa ya n'okpuru.
Daalụ maka ịgụ Mikel Childhood Story Plus Na-adịghị agbagha eziokwu. Biko lelee anya maka isiokwu ndị nwere ike ịmasị gị.
Yann Sommer Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Unai Simon Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Conor Gallagher Child Story Plus Ihe Na -adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Marc Guehi nwata akụkọ akụkọ gbasara eziokwu
Andre Schurrle Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Ashley Cole Child Story Story na-emeghe akụkọ ihe omuma